Adapted Physical Specialists Education Job Inkcazelo / Izabelo And Imbopheleleko isifanekiso – JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Adapted Physical Specialists Education Job Inkcazelo / Izabelo And Imbopheleleko isifanekiso
superadmin Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 1 Comment 832 Views
Nika zifanele zoqeqesho kwezemfundo okanye nezisombululo abantwana, ulutsha, okanye grownups neminqweno ezizodwa lokwenene ngenxa yokukhubazeka ezongezelelweyo okanye zomziba baphazamiseka zophuhliso.
Begxeka ingaguqulwa ubuchule okanye iiphakheji physical education ukuqinisekisa ukuvumelana usebenzisa imithetho ezahlukeneyo okanye emsebenzini.
Fumana okanye bafuna gear physical education, ekulandeleni iindlela eziphambili.
Yenza ncomo ukushwankathela umfundi ukusebenza, phambili udlelwano, okanye inkqubela real.
Ukuya njengomqeqeshi inkonzo, iiklasi, okanye zesihlwele kuhlala oluhlaziyiweyo iindlela ezikhoyo ulwazi etshintshwe apha emzimbeni okanye imikhwa,.
Ukuvelisa okanye ulungise iimbono zemfundo wena (IEPs) malunga abafundi kunye iimbandezelo palsy okanye emzimbeni.
Supply abantu ingxelo ukuba HIV nezakubalola-kwaye ibancede ukudala ukuqonda malunga imfundo yokwenene.
Nika umntu okanye iindidi amancinci abantu ukuba naphaya uqeqesho uqeqesho komzimba esanelisayo ezinqwenelekayo azifunayo ngokwasemzimbeni okanye injongo.
Lungiselela izicwangciso isifundo ngokungqinelana qhinga semfundo (IEPs) kunye nobuchule luncedo okanye kwiimfuno zabafundi.
Gcina umfundi ukuba iirekhodi epheleleyo ukubhala uphuculo, okanye umsebenzi, ukubandakanyeka, eqinisekisa ingasese zonke iirekhodi.
Ukugcina stock yemveliso, iimveliso, okanye izixhobo zokuqeqesha.
Ukuvavanya iimfuno mafutha ukuba abafundi ezithile ukufumana phandle aphila kwiinkampani kuqulunqwe ukuba ngokomzimba.
Chonga nokugcina iindlela zokuziphatha ukudala ekhuselekileyo, ehlelekile, kunye bume enamandla ekuqondeni.
Ukucacisa ukuziphatha okuboniweyo kunye izifundo umfundi inkqubela abazali, ootitshala, okanye abaququzeleli.
izicelo zoqeqesho Physical kuloo esetyenziswa yi ancedise ukuhlolwa okanye ukugcinwa kwabafundi.
Hlaziya abantu’ uphuculo okanye iimfuno.
Khuthaza iingcali ulwazi abafundi’ iitalente okanye iimbandezelo kwakunye namagumbi eziyimfuneko ukuphucula impumelelo yabo nkululeko.
Tshintsha ukuqeqesha ubuchule babafundi ukuya isakhono kunye nobudala izidanga.
izisombululo imfundo Physical abasetyenziswa ukunika kubantu abanengxaki wamathambo, Autism iingxaki zengqondo, okanye ezahlukeneyo isifo eyayinzima.
Xelela abantu, zokuqasha izenzo imfundo kusetyenziswa ezibe emzimbeni, ukuphucula izakhono gross-motor, conditioning, zomziba okuqonda, okanye kwezemidlalo kunye nempumelelo zezemidlalo.
Imisebenzi Job Kuyimfuneko
Ukufunda Ulwazi-Isicatshulwa izivakalisi nemihlathi zilungiswe ngayo amaphepha ezinxulumene nomsebenzi.
Active Ukuphulaphula-Ukunika ingqalelo yonke into nabanye-abantu bathi, ukuthatha ixesha ukuqonda izinto kokuba eyenziweyo, imibuzo ukubuza olufanelekileyo, kwaye mesmerizing kwi izihlandlo ukuba azilunganga.
Ukushicilela-Ukusebenzelana ngempumelelo ebhaliweyo njengoko ezingafanelekanga ukuba iimfuno zemalike.
Ukunxibelelana-Ukuthetha nabanye ukudlulisa data eyiyo.
Yokalo emileyo-Ukusebenzisa izibalo ukulungisa imiba.
iindlela Science-Ukusebenzisa kunye nemigaqo-nkqubo zonyango ukusombulula imiba.
Critical sizathu Ukucinga-Ukusetyenziswa yaye ndacinga ukuba bayibone ubuthathaka kunye nezakhono iinketho enye, iziphumo okanye iindlela ukuba iingxaki.
Active-Learning-ukusiqonda nokunaba leefekthi into entsha zombini izigqibo zokusombulula iingxaki zangoku nezexesha elizayo kunye.
Ukufunda Iindlela-ngokuqasha nokuzithatha zokufundisa / izicwangciso tutorial kunye neendlela ezazibonisa ingxaki ukufundisa okanye xa sele uyincutshe ekudlaleni izinto ezintsha.
Ukukhangela-Ukukhangela / Ukumisa ukusebenza ngokwakho, Abantu ezahlukileyo, okanye ii-arhente athathe amanyathelo olungiso okanye aveze zikude.
Social Perceptiveness-Ukuba abazi iimpendulo othersI nokuqonda kutheni kusabela ngenxa yokuba benze.
Ukweyisela-Ndeyisela abanye ukuphucula izenzo okanye nongqondongqondo zabo.
Ulamlo-Ukuthatha abanye ngokudibeneyo kwaye uzame axolelanise mahluko.
Uqeqesho-Ukuyalela abanye ncam ukuba bafudukele.
Orientation-Ngokuqinisekileyo inkampani efuna iindlela ukuncedisa abantu.
Advanced ukusombulula iingxaki-umahluko iingxaki ezintsonkothileyo siphanda izibakala ezalana isicelo iimpendulo uze uhlolisise kunye nokuphuhlisa amathuba.
Amashishini Uphando-zokuhlola ifuna kunye namabango imveliso ukwenza uyilo.
Engineering Design-Engineering ukunceda umntu kunye nezixhobo ekusekeni okanye ukudala kufuna.
iiphakheji kokufaka-kokufaka, imishini, zikagesi, okanye elabiwe ukwanelisa iimfuno.
Development-Ukubhala izicelo computer ngenxa yezizathu ukuba ezahlukeneyo.
Imisebenzi yokulinganisa Monitoring-Z, izibambo, okanye izikhombisi ezahlukeneyo ukuqiniseka umatshini ngoku ezisebenza ngempumelelo.
Ukusebenza kwaye Phatha-oPhetheyo imisebenzi lweenkqubo okanye izixhobo.
Izixhobo Ulondolozo-oLawulayo ukunakekela izixhobo nokumisela nini na, oluhlobo luni zokukhwelisa kuya kuba yimfuneko.
Zokusombulula-Ukukhetha izinto ngasemva iimpazamo ukuba awusebenzisi kwaye ukhetha oko ulwalathiso ukuya ngayo.
Ukubuyisela-Ukulungisa iinkqubo okanye iimveliso ngokusebenzisa le ndlela kubalulekile.
Quality-Control Uphando-Ukwenza uphando iitsheki kweemveliso, iinkampani, okanye iinkqubo ukuba ukuvavanya ukusebenza okanye kakhulu.
Izigwebo, kwaye Decisionmaking-ingqalelo iintlawulo ezifanayo kunye nezinto ezinkulu malunga amanyathelo zinako ukuba ukhethe lowo afanelekile kakhulu.
Systems Analysis-Ukufanisa kufuneka basebenze luhlobo luni indlela nendlela kuhlenga-iingxaki, imisebenzi, kwaye emoyeni kuya kuba nefuthe kwiziphumo.
Methods Evaluation-Ukumisela amanyathelo okanye iimpawu yokusebenza kwenkqubo kwakunye xa kuthelekiswa neethagethi icebo elililo okanye amanyathelo afunekayo ukuze kwandiswe ukusebenza.
Timemanagement-Ukusingatha mzuzu lomnye.
Imisebenzi of Financial Resources-isigqibo imali iza kusetyenziswa njani ukuze ufumane umsebenzi kufezwa, nentengiso ngenxa yezi ndleko.
Kweliso iziyobisi Resources-Kukwamkela nokuhlola ukuze kube nokusetyenziswa ngokufanelekileyo inamacandelo, ezithuba ezabelwe, kunye nezixhobo ezifunekayo ukuze benze umsebenzi ethile.
Kweliso Abasebenzi Resources-Building, idolo, nokukhokela abantu xa besebenza, ekuboneni abantu kwalelo umsebenzi.
phezu 1 unyaka, phezulu-ukuya isibini iminyaka yaye kubandakanywa,
Sebenza Umyalelo Skills Izidingo
Ingxaki malunga Abanye – %
Ukuqaphela aspect – %
Intuthuko – %
Pingback: Outsourcing Small Business For More Profits - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Mazaj, BoomBoom)